प्रशंसापत्र व्यवसाय प्रदर्शन - मन जीवित - मानसिक स्वास्थ्य र विश्राम
प्रशंसापत्र व्यवसाय प्रदर्शन
GC बाट प्रशंसापत्र
न्यू योर्क, न्यूयोर्क, अमेरिका
अगस्ट 8, 2013
उल्लेखनीय मेसिन (प्रसन्न प्लस)। के यसले परिणाम ल्याउँछ? बिल्कुल। मैले यो एक हप्ताको लागि मात्र प्रयोग गरिरहेको छु र म मेरो मस्तिष्कमा शक्तिशाली ऊर्जावान र फ्रिक्वेन्सी परिवर्तनका साथै चेतना र जागरूकताको एक निश्चित तिर्खा महसुस गर्न सक्छु। यसलाई Lumosity साथ प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंको मस्तिष्कलाई बृद्धि गर्न र विकासको लागि बृद्धि हुनेछ। मलाई सबैभन्दा मन पर्ने कुरा के हो भने, अनुभव सानोतिनो होइन। यो शुद्ध विज्ञान हो र तपाई यसलाई आफ्नो मस्तिष्क, दिमाग, बोध, बौद्धिकता र वास्तविक समयमा जागरूकता परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
डिसेम्बर 4, 2008
"एन्ट्रेमेन्ट थेरामीलाई धन्यवाद, मैले गर्न असमर्थ भएकोले मैले गर्न असफल भएको छु। ध्यान केन्द्रित गर्न र कार्य उन्मुख रहने मेरो नयाँ क्षमताको साथ, म हालसालै एक पुरस्कार विजेता लेखक बन्न पुगेको छु! यो सम्भव हुने थिएन, यदि यो मेरो शान्त पलक बत्तीहरूको लागि नभएको भए। ”
रोमन मुर, MD, MBA बाट प्रशंसापत्र
फेब्रुअरी 6, 1997
"यो काम गर्दछ, यो काम गर्दछ, यो काम गर्दछ !!! ठूलो उत्साहका साथ म तपाईंलाई यो कुरा बताउन पाउँदा खुसी छु कि धेरै पटक आधा सफल मानसिक प्रशिक्षण पछि, मैले ठोस परिणामहरू प्राप्त गरें। HPP टेपहरू, OASIS र DAVID सँगै, निस्सन्देह व्यवहार, भावनाहरू र भावनाहरूको छिटो र गहन परिवर्तन उत्पन्न गर्दछ। अधिक परिणामहरू राम्रो प्रदर्शन र तनाव व्यवस्थापन, समय संगठन र अन्य व्यवसाय र समग्र उपलब्धिहरूमा सुधार थिए।
परिणामहरू छिटो, गहन र धेरै ठोस भएको छ। अन्य पेशेवर मनोचिकित्सा प्रविधिहरूको साथ प्राप्त परिणामहरू पनि अधिक स्पष्ट भयो। यस्तो देखिन्छ कि राम्रो मानसिक प्रदर्शनको एक ठूलो पहेली अन्ततः वांछनीय आकृति प्राप्त भयो। अब म विकासलाई निरन्तरता दिन अत्यन्तै उत्सुक छु, साथै आफ्ना कर्मचारीहरू र बिरामीहरूसँग शिक्षा र परामर्श पनि। ”
जोन ब्रेथाउअरबाट प्रशंसापत्र
अगस्ट 27, 1996
"मेरो नाम जोन ब्रेथाउर हो र म कमोडिटी ब्रोकर हुँ। कमोडिटी व्यवसायमा, एक पटक 'खेल' खेल्ने कलाको स्थानमा भएपछि, सफल हुनको लागि बाँकी चुनौतीलाई भविष्यमा बजारले कस्तो प्रदर्शन गर्ने छ भन्ने निर्धारण गर्ने क्षमता चाहिन्छ। कमोडिटी ट्रेडिंग भावनाहरूमा आधारित छ। अन्य दलाल र बजार दबाबहरूको दिमागको स्थिति सेन्स गर्नु भनेको लड़ाईको 90 ०% छ। मैले सोचे कि मैले यो फाइदा पाएको छु किनकि मैले शान्त रहने प्रयासको रूपमा ध्यान गरें। नतिजाको रूपमा मैले औसतमा प्रति महिना १०% लाभ प्राप्त गरें।
मैले १ 1996 XNUMX of को वसन्तमा एक DAVID खरीद गर्‍यो किनभने मेरो ध्यानले मलाई शान्त रहन मद्दत गरिरहेको छैन जस्तो मलाई मनपर्दछ। म DAVID को प्रयोग गरेर मलाई शान्त रहनको लागि प्रयोग गर्दछु जबकि अन्यहरू त्रासको स्थितिमा हुन्छन्। अर्को शब्दमा, उनीहरूको डरमा आधारित ट्रेडिंगले मेरो लागि व्यापार अवसरहरू सिर्जना गर्दछ!
डेभिडले मलाई मेरो लाभहरू १०% बाट एक महिनामा %० %सम्म बढाउन मद्दत गरेको छ। भर्खरै, मैले डेभिडले सिर्जना गरेको सृजनात्मक अन्तर्दृष्टिबाट अगाडि ल्याइएको अन्तरदृष्टिको परिणाम स्वरूप एक महिनामा १००% लाभ प्राप्त गरें। म हेडफोन लगाउँछु र श्रवणिय पिटाईले मलाई आराम गर्न मद्दत गर्दछ जब म कम्प्यूटरमा मेरो ट्रेडिंग गर्दछु। दिउँसोमा, व्यापार दिनको लागि समाप्त भएपछि, म minute 10 मिनेटको डेल्टा सत्र चलाउँछु र बजारको बारेमा अन्तर्दृष्टि सम्झन्छु। यो तब हो जब मेरो सबै भन्दा राम्रा विचारहरूको स्प्यान्ड हुन्छ।
मलाई आशा छ कि खेलमा अन्य मानिसहरूले यस प्रविधिमा अडिग नबनाउन्जेल म तिनीहरूको डरबाट फाइदा लिन्छु, जसले गर्दा मेरो फाइदा हुन्छ। ”